Kooxda Manchester United oo doonaysa inay la soo wareegto Weeraryahan ka dheela horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 26 Abriil 2018. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa inay la soo wareegto Weeraryahanka ka dheela horyaalka Premier League ee Richarlison.
Weeraryahanka kooxda Everton ee Richarlison ayaa bartilmaameed u noqday kooxda ka dhisan garoonka Old Traffrod ee Manchester United, waxaana ay doonaysaa inay la soo wareegto marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa la filayaa inuu isbedel weyn ku sameeyo shaxdiisa, isagoo raba inuu sare u qaado tayada kooxdiisa Man United inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga haddii ay kooxdu u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda iyo haddii aysan u soo bixinba.
Tababaraha reer Norway ee Ole ayaa laga yaabaa inuu mudnaanta koowaad siiyo inuu iska adkeeyo dhinacyada Weerarka iyo Difaaca, Jariiradda The Telegraph ayaana warinaysa inay hadda jirto suurto-galnimo uu kula soo saxiixanayo Richarlison.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ayaa ku raaxaysanaya xilli ciyaareedkiisii kooowaad ee garoonka Goodison Park, waxaana uu dhaliyey 13 gool isagoo caawiyey gool kale 33 kulan oo ciyaaray horyaalka Premier League.
Everton ayaysan u badnayn inay wax xiiso u qabaan inay iska iibiyaan weeraryahankan, inkastoo ay suurto-gal tahay inay fursad u helaan inay faa’iido wayn oo lacageed ka sameeyaan ciyaaryahan oo kaliya ay la soo saxiixdeen xagaagii la soo dhaafay.
21-sano jirkaan ayaa weli waxa uu gacanta ku haystaa afar sano in ka badan oo kaga harsan heshiiska uu kula jiro naadiga Toffees lagu naanayso ee Everton.
Kooxda uu doonayo inuu ku biiro Goolayaha Real Madrid ee Keylor Navas oo daaha laga rogay